China PC Crusher rụpụta na Factory | Jiarui
PC usoro plastic crusher absorbs anụ ụlọ na ndị mba ọzọ elu technology; o nwere ezi uche imewe na ugboro ugboro ule na-akawanye mma.
1. A na-eji ígwè ọrụ pụrụ iche arụ ọrụ nụchaa ngwa ọrụ ịcha. Enwere ike idozi mkpochapụ nke ngwá ọrụ ahụ, enwere ike ịmịchaa ngwa ngwa ahụ ma dịgide.
2. A na-eji nkedo ígwè dị elu mee ka agụba na cutter base, nke nwere ikike dị ike.
3. A na-anabata obere ọsọ na mkpuchi ụda iji belata mkpọtụ.
4. The moto na-onwem na bufee nchedo na ike interlock nchedo ngwaọrụ ka okpukpu abụọ chebe nchekwa nke moto na ọrụ.
5. The nri hopper adopts kachasị imewe na pụrụ iche mgbochi ajari ọgwụgwọ zere leakage na mmetọ nke ihe na ndinuak usoro.
6. Iche iche, hopper, isi ahu, sieve myọcha isi dị mfe iji wepu ma dị ọcha.
7. designdị zuru oke nke ngwaọrụ ihapu na-eme ka ọ dị mfe maka onye ọrụ dị ọcha.
8. Ubube ụdị na-akpụ akpụ mma imewe, na-agbasa ike dị ike.
Njirimara njirimara nke mpempe akwụkwọ:
Ọdịdị nke agụba agụba bụ n'etiti mboanuohia mma na ewepụghị mma, nke adabara ndinuak plastic ngwaahịa na sprues dị ka ndị nkịtị mpempe akwụkwọ, ọjà, profaịlụ, efere na nkwakọ materials.General nzube plastic crusher adopts kaa akara amị na-amị na-agba nke ọma ogologo oge; na imewe nke mma udi bụ ihe ezi uche na ngwaahịa granulation bụ edo; oche cutter bụ ihe na-ekpo ọkụ, ọdịdị ọdịdị ahụ mara mma ma na-emesapụ aka.
Performance e ji mara nke mboanuohia cutter crusher:
O kwesịrị ekwesị maka ịpịpịa na iji ụdị plastik niile, karịsịa maka ụdị plastik siri ike (dịka isi ihe, isi akpụkpọ ụkwụ ikpeazụ, wdg), nhazi kachasị nke akụrụngwa izu ike, mma mịcha nwere ike ịchụsasị aka aka, yabụ na ike ịkwa osisi nke mma ọ bụla na-abawanye, nke kwesịrị ekwesị maka ịzọpịa ihe ndị gbara ọkpụrụkpụ, ihe mgbochi siri ike, isi ihe onwunwe, wdg; ọ nwere ike n'ụzọ dị irè melite ịcha ike nke ịcha ngwaọrụ na belata ngwá ọrụ eyi; ọ na-onwem na electric akara nchekwa imewe, na igbe ahụ adopts Ugboro abụọ oyi akwa Ọdịdị, jupụtara ụda mkpuchi ihe, na-eme ka akụrụngwa nwere ezigbo nchekwa na gburugburu ebe obibi nchebe, ike ịzọpụta na inogide.
Performance e ji mara ewepụghị cutter crusher:
O kwesịrị ekwesị ka igbe, mkpa anwụrụ, igbu ịkpụzi akụkụ, karama, shells, Pee, eyi film ihe na ndị ọzọ na plastic imegharị ihe maka iji. The ewepụghị cutter usoro crusher dị mfe iji rụọ ọrụ na mfe ịgbanwe. The obosara ewepụghị mma Ọdịdị kwesịrị ekwesị maka ndinuak mkpa-walled na mkpa ihe onwunwe ngwaahịa, na mma ndinuak arụmọrụ. Ejiri usoro nchebe eletrik na-arụ ọrụ ya, igbe igbe okpukpu abụọ ma jupụta na ihe mkpuchi mkpuchi, nke na-eme ka akụrụngwa nwee ezigbo nchekwa na nchekwa gburugburu ebe obibi, nchekwa ike ma sie ike.
Osote: PC Nrụgide oru
Brakwanyere braided sooks extrusion Line
Single mgbidi corrugated anwụrụ mmepụta akara